Heart Museum: ဝယ်ကြအုံးမလား အိမ်မက်အိမ်(၂)
အိမ်ဝယ်ယူသူ အများစု အတွေးမှား၊ အမြင်မှားတတ်တာ တခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အိမ်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ လက်ငင်းပေးချေငွေ ( Down Payment ) ပေးပြီးရင် ကုန်စရာ မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ ဘဝမှာတော့ လက်ငင်းပေးချေငွေ ပေးပြီးနောက်မှာ ငွေရေးကြေးရေးအရ ကုန်ကျစရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ အိမ်စစ်ဆေးစရိတ် ( Home inspection ) $300ခန့် အပြင်၊ ရာဖြတ်ကြေး( appraisal fee )၊ တန်ဖိုးစစ်ဆေးရေး စရိတ် (survey ) ၊ အိမ်အာမခံ ( title search and title insurance)၊ ရှေ့နေစားရိတ် (recording fees and attorney's fees)၊ အချို့ပြည်နယ်တွေမှာ ဝယ်ခွန် (Transfer Fee) ပေးရပါမယ်။ ရောင်းချသူက ပေးဆောင်ထားတဲ့ အိမ်ခွန်( Property Tax) စတာတွေကို အိမ်ဝယ်သူက ပေးချေဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီကုန်ကျငွေတွေ အားလုံးကို ပြန်လည်ပြီး အသေးစိတ် တွက်ချက်ရင် အိမ်တန်ဖိုးရဲ့ 3% မှ 8% ထိရှိတဲ့အတွက် သထိထားပြီး ပြင်ဆင်စုဆောင်း ထားရမယ့် လက်ငင်း ကုန်ကျငွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်က အပိုင်း(၁)မှာ ပြောခဲ့သလို လစဉ်ကုန်ကျမယ့် အိမ်ရဲ့အခြား အထွေထွေ ကုန်ကျစားရိတ် ( အမှိုက်ခွန်၊ ရေခွန်၊ မြက်ခင်းနှင့် ပန်းအလှပင် ထိန်းသိမ်းမှု စားရိတ် စသည့် ) တွေလည်း ရှိသေးတာမို့ အိမ်အတွက် သုံးငွေ နှင့် ဝင်ငွေအချိုးကို ကြိုတင်စီစဉ် တွက်ချက် ထားသင့်ပါတယ်။ Condo ဝယ်ရင် ဒီကုန်ကျစားရိတ် မရှိဘူး ပြောကြပေမယ့် သူလဲ ကြောက်စရာကောင်းအောင် Association Fees ဆော်တာပါပဲ။ ဖြစ်နိူင်ရင် အိမ်ရောင်းသူရဲ့ အမှန်တကယ် အိမ်အသုံးစားရိတ်ကို မေးမြန်းသင့်သလို၊ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ဝယ်မယ့် အိမ်နဲ့ အရွယ်တူ၊ ဈေးနှုန်းတူ အိမ်ရဲ့ အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလဲ စုံစမ်းတီးခေါက် ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်တချက် ထပ်လောင်း သတိပေး လိုတာကတော့ အိမ်ဝယ်မယ့် တကိုယ်ရေတကာရသမား တွေကိုပါ။ မိမိဟာ တကိုယ်ရေသမားမို့ ကျောင်းကောင်း၊မကောင်း စုံစမ်းစရာမလို၊ အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်လာရင် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် ထွက်လည်မယ့်သူ မဟုတ်လို့ အိမ်နီးနားချင်း ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကို လေ့လာစရာ မလိုဟု အထင်မှား အတွေးမှား တတ်ကြလို့ပါ။ ကိုယ်တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ ယခုဝယ်မယ့် အိမ်ကို အမြတ်အစွန်းရလို့ ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိူင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ဝယ်လက်က သားသမီးရှိသူ ဖြစ်ရင် စောစောတုန်းက အခြေအနေတွေကို သေချာပေါက် လေ့လာကြမှာပါ။ လေ့လာလို့ ကိုယ့်အိမ်က သူတို့ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံမဝင်ရင် ကိုယ့်ကြိုက်ဈေး ရချင်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဖြစ်နိူင်ရင် ကျောင်းကောင်း၊ ရပ်ကွက်ကောင်းတဲ့ နေရာကို ဦးစားပေး ရွေးချယ် စေလိုပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး အိမ်ဝယ်သူ အများစုဟာ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စာရွက်စာတမ်း၊ ဥပဒေရေးရာ တွေကို မသိကြလေတော့ အိမ်ပွဲစားကို ပုံအပ်တတ်ကြပါတယ်။ အိမ်ပွဲစားတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက် အခြေအနေကို သိကြသမို့၊ မိမိအတွက် လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးနိူင်တဲ့ အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အိမ်ပွဲစားကို ကိုယ်သိလိုတဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ အားမနာပါနဲ့။ မကြောက်ရွံ့ ပါနှင့်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အိမ်ပွဲစားတွေဟာ ရောင်းသူဖက်က အလုပ်လုပ်ပေး ကြတယ်ဆိုတာကို သတိပြု စေလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပွဲခကို မိမိက ပေးတာမဟုတ်ပဲ အိမ်ရောင်းရငွေရဲ့ 3% ကနေ 7% အထိ အိမ်ရောင်းသူထံက သူတို့က ရကြတာမို့ အိမ်ဝယ်သူကို ကော်မရှင် ပိုရရင် ရသလို အချွန်နဲ့ မတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးမယ့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ပွဲစားကို လိုချင်ရင်တော့ ကိုယ်ကပွဲခ ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အပိုကုန်ကျတာဆိုတဲ့ အမြင်လေး ကျွန်တော့်မှာ ရှိသမို့ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်က ပေးရမယ့် ပွဲစား ငှားဖို့ သိတ်ပြီး အားမပေးပါဘူး။ ကိုယ်ဝယ်မယ့် အိမ်ရဲ့ ဈေးကွက် ပေါက်ဈေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကို ကိုယ်ကိုတိုင် အချိန်ပေး စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒါမှလဲ ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ အမှားအယွင်း ကင်းမှာပါ။
အိမ်ဝယ်ရာမှာ သတိထားရမယ့် အရေးကြီး အချက် တခုကတော့ အိမ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု စားရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ်အဝန်းတူ၊ နေရာ အကွက်အကွင်း တူရင်တောင်မှာ အိမ်ရောင်းဈေးတွေမှာ အိမ်ကောင်းရင် ဈေးကောင်းတတ်ပြီး အိမ်စုတ်ရင် ဈေးပေါတတ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ ဈေးပေါတာကို မက်ပြီး အိမ်မကောင်းတာ ဝယ်ပြီး အိမ်ပြင်လိုက်တာ ပြင်စားရိတ်ကုန်ကျငွေကို ထပ်ပေါင်းရင် အိမ်ကောင်းကို ဝယ်တာထက် ပိုမိုကုန်ကျတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အိမ်ဟောင်းဝယ်ရင် ကိုယ်ပြင်ဆင်ရမယ့် အပိုင်းတွေကို အိမ်စစ်ဆေးသူ( Home Inspector)နဲ့ သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီး ကုန်ကျစားရိတ်ကို အသေးစိတ် ကြိုတင်တွက်ချက် မှန်းဆထားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်New York နဲ့ Los Angeles County မှာ ဝယ်မယ်ဆိုရင် အိမ်အသစ်ရဖို့ မဖြစ်နိူင်သလောက်မို့ပါ။
*** အချိန်မရတော့လို့ နောက်ရက်တွေမှပဲ housing market, Income & loan calculation, credit history, ကျွန်တော့်လို အမေရိကန်နိူင်ငံသား မဟုတ်ပဲ အိမ်ဝယ်ယူမှု စတာတွေကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါရစေ။ မိတ်ဆွေတို့ သိရှိထားပြီး ကျွန်တော်မသိတဲ့ ကိစ္စတွေများ ရှိရင်လဲ ထောက်ပြဝေဖန် အကြံပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။***
Posted by Heartmuseum at 9:24 AM
ဗဟုသုတ ရပါတယ်..ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
မဝယ်ဘူးဂျာ ပိုက်ပိုက်မရှိဘူး ဘယ်လိုလဲ ချေးမလားဟင် ဟဟဟ လာတယ်နော် ဘိုင် တာ့တာ
these posts are very valuable for readers who want to buyahouse in US.
they givesalot of info. thanks you very much.
please write more about that. i am waiting for your new posts.
၀ယ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်လဲ ဖတ်သွားတယ်။။။ ဟတ်ကြီးတော့ Research အသေအချာလုပ်ထားတယ် ထင်တယ်။ :)
ဝယ်ဖို.လုပ်မယ်။ thanks your post
အမ မဟာဆန်သူရေ... စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူး.....
ငှက်မရေ.... ငွေအကြောင်းပြောရင် နေစောင်းသွားမယ်။ ဘယ်လောက်လိုချင်လဲပြော ဘဏ်ဓားပြ တိုက်ရင် ဦးဆောင် ခိုင်းမယ်... :D
Hi, Anonymous! Thank you for your comment. If you get some idea from these posts. I really please for that. I will share all of my knowledge about housing market. Please come & read. Take care!
Apရေ... လာဖတ်တာ ကျေးဇူးနော်.... ဟုတ်တယ် မှားမှာကြောက်လို့ သေသေချာချာ research လုပ်ထားတာ။
အမAnonymous ရေ.... အမဘယ်သူဆိုတာ မှန်းလို့ရပေမယ့် နာမည် မဖော်စေ ချင်တော့
ကျွန်တော်လဲ မသိချင်ယောင် ဆောင်မယ်နော်...ဟီးးးးးး
ဒီအချိန်မှာ အိမ်ဝယ်သင့်နေပြီ အမ..interest rate တွေတောင် စတက်နေပြီ။
ဒီပိုစ်တွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ လာလာဖတ်နေတာ ကနေဒါရဲ့အိမ်ဈေးကွက်နဲ့ယှဉ်ပြီး ဗဟုသုတတွေ အရမ်းတိုးပါတယ်။
ရပ်ကွက်တစ်ခုကို ပြောင်းဖို့ မလေးစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ အဲဒီရပ်ကွက်က ပတ်ဝန်းကျင်သင့်တယ်၊ ကျောင်း rating မြင့်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်း rating မြင့်ရခြင်းအကြောင်းက အာရှတိုက်သားများတယ်။ အာရှတိုက်သားများရင် အနည်းနဲ့အများ superficial ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ အပေါ်ယံများတယ် အပြိုင်အဆိုင်များတယ်၊ (I'm so sorry to say that.. I can't choose another word) နောက်တစ်ခုက အဲဒီရပ်ကွက်မှာ အိမ်အသစ် မရနိုင်တော့ဘူး။ အိမ်တွေက နှစ်၂၀၊ ၂၅ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရောင်းသမျှအိမ်ကို သွားကြည့်ရင် အဖြူတွေဖြစ်နေတယ်။ အိမ်တွေက ကောင်းနေသေးပေမယ့် နောက်ထပ်၁၀နှစ်နေတယ်ဆိုတောင် အနှစ်သုံးဆယ်ဖြစ်နေပြီ။ အဖြူတွေကလည်း အဲဒီထဲက ထွက်ကုန်ပြီ။ မြို့ပြင်က အိမ်အသစ်၊ ရပ်ကွက်အသစ်မှာ သူတို့ အဖြူ community အသစ်တွေ စတင်ထူထောင်နေကြပြီ။ ကြာရင် ကျန်ခဲ့တဲ့ အဲဒီရပ်ကွက်ဟာ Asian Ghetto ဖြစ်သွားတော့မယ်။ အခုလည်းဖြစ်နေပြီ။
အဖြူတွေချည်းပဲ နေတဲ့နေရာမှာလည်း လိုက်ဝယ်လို့ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဗင်ကူးဗားမြို့ထဲရွှေ့ဖို့လည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် သင့်တော်တဲ့ခုအိမ်လေးကိုရောင်းပြီး မြို့ထဲကပြိုကျတော့မယ့် အိမ်တွေကို ဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါးပေးနေရအောင် ဘ၀ဟာ မပြည့်စုံဘူး။
အခုချိန်မှာတော့ ၈နှစ်အတွင်းလောက်မှာ အိမ်ဈေးတွေ ၂ဆတက်တော့ မြတ်နေကြသေးပေမယ့် ကနေဒါအိမ်ဈေးကွက် ယူအက်စ်လို ပူပေါင်းမပေါက်ဖူးလို့၊ interest rate ထိုးမတက်ဖူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။
research တွေလုပ်ရတာလည်း ခေါင်းဖြူတော့မယ်။ အင်ဖိုတွေသိပ်များတော့လည်း I'm so overwhelmed now.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ပိုစ်တစ်ပုဒ်စာနီးနီး ကော့မန့်ယောင်ယောင်၊ ရင်ဖွင့်ခွင့်ရလို့။